Iscasilada Muuse Iyo Kooxda Mafiyada Ah By Mukhtar Cilmi
Iscasilada Muuse Iyo Kooxda Mafiyada Ah By Mukhtar Cilmi 0 July 12, 2015 in Articles by Shaqaalaha SLL Media Visits: 845
Iscasilada Muuse Iyo Kooxda Mafiyada Ah By Mukhtar Cilmi Asalamu calaykum waraxmatulahi wabarakato.
Waxaan halkan aad uga salaamayaa bahda Shabakada Caalamiiga Togaherer.com
wararka sheegayay inuu muse biixi is casilayo dhawaan way ruunobayn waayo waxa soo baxday in koox yar oo maafiya ah haysato xisbigii KULMIYE !!oona ahayn xisbi qaran!!. sida ay wararku sheegayaan muuse biixi wuu is casilaya waxaana beeshiisa mudan loogu maslixi doono mashaariic iyo xilal !!!,halka hankoodo aha musharaxnimada soo socota ku tartamaan. in ay koox gaar ah leedahay xisbiga waxa ku cad dagaalkii ay ku qaadayn Muuse Biixi marku shaaciyay musharaxnimadiisa ,ka dibna ila haatan lagu hayo dagaal weyn si u iscasilo wadadana u beneeyo maafyadda xukunta KULMIYE !!. waa yaab in han umadd lagu maslaxo mashaariic ila maahana laga aqbali doono taas ,kulmiye na ramadaanta ka dib wuu haawan doono !!. dadki ku waalan jiray KULMIYE waa qaran beenooday, waxaana sida wararku sheegayaan in xafiisyadii kulmiye maamuladoodii ay wada bilaabayaan is casilaadoodi gaar ahaan hargeysaa ,gabiley,laascaanod , iyo xubno golaha dheexe ee la garab taagana muuse biixi, xubno golaha fulinta, waana bilawgii burburkii kama dambayska aha ee Qudhmiye !. sida wararko sheegayaana waxaana is casilaya jaamac shabeel (Jaamac bisad) iyo kuwa kale taageersanaan jiray muuse ayaamahan soo socda iyagana.